भदौ ७ र ८ गते नेपालकै सबैभन्दा ठुलो ह्याकथन “एसियन ह्याक” हुदै – रियलपाटी
Posted on August 14, 2019 August 15, 2019 Author real pati	Comments Off on भदौ ७ र ८ गते नेपालकै सबैभन्दा ठुलो ह्याकथन “एसियन ह्याक” हुदै
भदौ ७ र ८ गते नेपालकै सबैभन्दा ठुलो ह्याकथन “एसियन ह्याक” हुने भएको छ ।
के हो “ह्याकाथन” ?
“ह्याकाथन” एक यस्तो सभा हो जहाँ प्रोग्रामरहरूले कम समयको अवधिमा एक चरम तरीकाले सहकार्य गर्दछ। कुनै विशेष परियोजनामा काम गर्दा, प्रत्येक विकासकर्ताले आफूले चाहेको जुन पनि काम गर्न सक्ने क्षमता र स्वतन्त्रताको लागि विचार राख्छ।
ह्याकाथनलाई ह्याकफेस्ट वा ह्याक डेको रूपमा पनि चिनिन्छ।
बिशेष रुप मा Computer र IT को क्षेत्रमा ह्याकाथनको महत्तो हुन्छ।
के हो “एसियन ह्याक” ?
“एसियन ह्याक” ४८ घण्टाको हैकाथन हो जहाँ बिभिन्न कलेजका विद्यार्थीहरू २-4 को समूहमा आउने छन। विचारहरू साझा गर्न र हाम्रो समाजले टेक्नोलोजीको माध्यमबाट प्रस्तुत र सामना गर्ने चुनौतीहरूको नवीन समाधानको विकास गर्न “एसियन ह्याक” ले मद्दत गर्ने छ। यस ह्याकाथनको लक्ष्य भनेको विद्यार्थी,विकासकर्ताहरू, डिजाइनरहरू र उद्यमीहरूलाई सँगै ल्याउनको लागि समाधानहरू ल्याउने हो।यस ह्याकाथनले डिजिटल नेपाल को इकोसिस्टममा सहयोग गर्ने छ।
यस ह्याकाथनमा अरु के छ ?
एस “एसियन ह्याक” अतिरिक्त प्रदर्शनहरू र मनोरन्जन सहितको एक ह्याकाथन हो। एशियनह्याकमा हामी कलेज प्रोजेक्टहरू, रोबोटिक्स प्रोजेक्टहरू, खेलहरू र स्टालहरू प्रदर्शन गर्ने छौं। धेरै प्रदर्शनीहरू यी प्रदर्शनीहरूमा आकर्षित हुनेछन् र आफैंमा विज्ञापनको लागि एक उत्तम ठाउँ हुने छ। थप रूपमा, हामी अतिरिक्त स्वैगहरू (स्टिकरहरू), टी-शर्टहरू प्रिन्ट गर्दैछौं।
ह्याकथनमा प्रथम हुनेले नगद रु ४०,००० पुरस्कारको रुपमा पाउने छन् भने फर्स्ट रनर अप ले नगद रु २०,००० पाउने छन् । त्यस्तै सेकेन्ड रनर अप ले रु १०,००० , बेस्ट फ्युचरिस्टिक मोडलले रु ५,००० र बेस्ट प्रेजेनटेसन ले रु ५,००० पुरस्कारको रुपमा पाउने छन् ।
नख्खु बम बिस्फोटका मुख्य योजनाकार पक्राउ
रियलपाटीललितपुर फागुन १४ ललितपुरको नख्खुमा गत शुक्रबार एनसेलको मुख्यालयलाई लक्षित बम विस्फोट गराएको आरोपमा नेकपाका एक नेता पक्राउ परेका छन् […]
Posted on April 26, 2019 May 1, 2019 Author real pati
काठमाडौं । साहित्यकार मोहनबहादुर कायस्थबाट लिखित सामयिक विषयका विविध रचनाहरुको संकलन बेलाको बोली एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको छ । […]
सडक दुर्घटनामा परी घाईते भएका आशिषलाई आर्थिक सहयोग
Posted on May 22, 2019 Author real pati
ललितपुर । गोदावरी नगरपालिका – ३ टौखेलका आशिष थापा मगर केहीसमयअगाडि सडक दुर्घटनामा परेका थिए । बाडेगाउ ,ग्लोबल हस्पिटल नजिक […]